နန်းဆုရတီစိုး ပြန်တွေ.ပြီလို. သိရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » နန်းဆုရတီစိုး ပြန်တွေ.ပြီလို. သိရ
နန်းဆုရတီစိုး ပြန်တွေ.ပြီလို. သိရ
Posted by Bayote on Oct 12, 2010 in Celebrity, Entertainment | 18 comments
အဒေါ်အိမ်မှာ ရှိခဲ့တယ်လို.ဂျာနယ်တစ်စောင်ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကမာရွတ်ရဲစခန်းမှာ ချစ်သူနဲ.လက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်လို.လဲ သတင်းထွက်နေကြောင်းပါ။
အဒေါ်အိမ်မှာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တာပဲ ….. မိဘတွေဒီလောက်ဒေါင်းတောက်အောင်ရှာတာတောင် သူကအဒေါ်အိမ်မှာ ဘာလုပ်နေရတာလဲ ။ ဒါကတော့လိမ်ညာပြီးဖြေတာပါ ပရိတ်သတ်ကို ငပိန်းတွေများထင်လို့လား ။
သူ့ချစ်သူနဲ့လက်မှတ်ထိုးတာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ နာမည်ကြီးမင်းသမီးပဲ ခိုးချောင်ခိုးဝှက်လင်နောက်လိုက်လို့မှအဆင်မပြေတာ ။ ဖွင့်ပြောလို့မရတဲ့ ပြသနာရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ် ။ ၀က်ဝံရွှေရည်တုန်းကလိုများဖြစ်နေမလားလို့ ။
etone ပြောတာ ဖြစ်နိုင်ချေ အများဆုံးဘဲ
ဟိုမျောက်လောင်းလေးတွေ ကိုလဲစစ်ပါလို့ 
တကယ်မပျောက်ဘူးဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ရဲချုပ်အထိ တက်တိုင်ရတာလဲ။
နန်းဆုရတီစိုးက နိုင်ငံတော်အတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါနေလို့လဲ။
သူ့အဒေါ် ချီးထုပ်မကြီးကရော တူမလေးကို ဘာဖြစ်လို့ ဖွက်ပေးထားရတာလဲ။
မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ ချစ်သူနဲ့လက်မှတ်ထိုးတယ်ဆိုတာ ပိုတောင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။
အပုလေးသာ ယောကျာ်းလေးဆိုရင် နန်းဆုကို ဘယ်တော့မှမယူဘူး။
သူနဲ့အတူတူနေရရင် မြန်မြန် အသက်တိုလိမ့်မယ်။
နန်းဆုပျောက်တာအကြောင်းတခုခုရှိပါလိမ့်မယ်။သားအမိနှစ်ယောက်စလုံး လေတွေနဲနဲ လျှော့နိုင်ကြပါစေ။
နာ့ကို ဘယ်သူမှ မရိပ်မိခင်
သြစတေးလျှကို ရွက်လှေနဲ့ လစ်မှ
ရဲစခန်းမှာက ဘာဖြစ်ရင် လက်မှတ်ထိုးရတာလဲ …
ရရှိလာသော နန်းဆုရတီစိုး ၏ နောက်ဆုံးသတင်းမှာ ပြန်ပေးဆွဲခံရမှု့ ကြောင့် ပျက်ကွက်ခဲ့ရသော အလုပ်များကို နန်းဆု မှ လက်ခံထားသောငွေများ ကို ပြန်လည်ပေးအပ်အလျော်ပေးရကြောင်း.အလုပ်ကိစ္စ များသည်လည်း ၅ ခု သို့ မဟုတ် ၆ခုလောက်ရှိသည်ဟုသိရသည်…
သို့ သော် ယခုထွက်နေသောသတင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချမ်းသာဆုံးသောသူဌေး၏ သား ဖြိုးတေဇ နှင့်ဟုလည်း သိရသည်.. ထို့ သူပိုင်ဆိုင်သော မင်းလမ်းရှိ Tocana စားသောက်ဆိုင်တွင်လည်း နန်းဆုရတီဆိုး၏ မွေးနေ့ ပွဲကိုလည်း ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရသည်… ps…..ဖြိုးတေဇ နှင့်လိုက်ပြေးသွားသည်မှာလည်း ယုန်ထင်ကြောင်ထင်ကိစ္စတစ်ရပ်ဟုလည်း သိရှိရပါသည်…
a ha … tal hote par lar. . nansuyatisoe ( Khine Kyee Kyel) ka tot phyo tay za n` so p`
ဟုတ်လောက်တယ်ဟေ့ မိုးကြိုးကို လက်နဲ့ ကာလို့ မှမရတာ၊ အချိန်တန်ရင် သိရမှာပေါ့ ဟဲ ဟဲ ဟဲ…………။
Asia Thar says:
etone ပြောတာ ဖြစ်နိုင်ချေ ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးပဲ/ အော် ရေခဲချောင်း ရေခဲချောင်း
နမ်းစုရ တီစိုး ရင်ကြပ်တော့မှာပဲ